musha UNITED UMAMBO FOOTBALL STORI Vatambi Vanotamba Yevatambi Brandon Williams Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
LB inopa Nyaya Yakazara YeBhora Genius Nezita reNickname "Bran". Yedu Brandon Williams Yemwana Nhau uye Untold Biography Chokwadi inounza kwauri nhoroondo yakazara yeinozivikanwa zviitiko kubva paudiki hwake nguva kusvika zvino.
Ehe, munhu wese anoziva kuti iye ari kuruboshwe-uyo akashinga, wepanyama uye panguva yekunyora, yakagadzirirwa kuramba Luke Shaw uye diki. Nekudaro, vashoma chete vevateveri venhabvu vanofunga shanduro yedu yeBrandon Williams 'Biography iyo inonakidza kwazvo. Iye zvino pasina kumbopfuurira mberi, ngatitangei.
Brandon Williams Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi - Nhoroondo Yemhuri uye Hupenyu hwepakutanga
Brandon Paul Brian Williams akaberekwa pa3th yaSeptember 2000 kuvabereki vake muguta reManchester, United Kingdom. Wenhabvu, kubva kuWhite English mhuri, akaberekwa panguva yekutanga kwemireniyumu itsva, iyo gore (2000) uko kukanganisika kwehunyanzvi sekutaura kwekutanga kwaizoitika- chaizvo hazvina kumboitika.
Chokwadi chinofanira kutaurwa!… Gore iro 2000 pakazvarwa Brandon, pakanga pasina Y2K, (iyo inozivikanwa inotyisa millenium bug). Muchokwadi, Ndege sezvakafanotaurwa hazvina kumbobvira zvadonha kubva kudenga. Kunyangwe makomba haana kupisa netsaona uye nekufungidzira kudzoreredzwa kwemazuva pamakomputa hakuna kumboitika. Iko kusavapo kweizvi zvakafungidzirwa zviitiko zvinotyisa zvakapa zororo huru vabereki vaBrandon Williams.
Kunge Marcus Rashford, Brandon Williams ane mhuri yake kubva kuguta guru reManchester. Iri iguta rine hombe mutambo wemitambo uye zvinonyanya kukosha, rakanyorwa seimwe yenzvimbo dzakanaka kugara muEurope. Kunyangwe iwe uchitsvaga chekudya chemanheru gourmet, upmarket wine bar, yechinyakare 'real ale'pub, kana nzvimbo yekutamba husiku kuenda kure, guta reManchester (rinowanidzirwa pazasi) rine zvese.
Nyeredzi yeManchester United yakakurira mumhuri yepakati mhuri yemhuri. Brandon's vabereki vakaita sevagari vemo vagari veManchester vaiita mabasa epakati asi vasina dzidzo yemari yepamusoro. Mhuri iyi yaigara mudzimba dzaiwanikwa mari shoma munzvimbo yairemerwa nemabasa ebhora.
Brandon Williams Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi - Dzidzo uye Basa Vaka
Unoziva here… Wese mukomana wepanzvimbo kubva kuManchester pakutanga kwehupenyu hwavo anofanirwa kusarudza kuti ivo a RED DEVIL OR HAPANA NECHEMA (Sky Blue) fan?.
Kupindura mubvunzo uyu kunokosha sezvo pasina chokwadi kuti une mhuri yako kunze kweguta. Nekusvika kwetsoka dzako kuManchester, iwe unotarisirwa kuve nemhinduro kumubvunzo. Zvekare, uchiri kupindura mubvunzo, iwe unofanirwa kunamatira kuti mhinduro yako irege kuenda-kure, sekusarudza mapato asina kwayakarerekera eg. Rochdale, Bolton Wanderers kana Wigan.
KwaBrandon Williams, mhinduro yacho yaive nyore- 'Manchester United ', kirabhu nhengo yake yose yemhuri yakatsigira. Asides kuve anofarira nhabvu uye achitamba mutambo uyu dzimwe nguva mushure menguva yekuchikoro, Brandon mudiki aiziva kuti aive netarenda rekuzviitira zita rake nhabvu. Achiri mudiki, akatanga kurota achizviona ari kuUnited's academy.
Kuti ushande nenzira yake kusvika kumazano ezvidzidzo, iyo-yakaoma-kuderera kuruboshwe-kumashure yakatanga kutamba mutambo uchikwikwidza kumatende emunharaunda eManchester. Hazvina kutora nguva refu asati azivikanwa neMan United scouts iyo yakamukoka miedzo nekirabhu. Kuzvishingisa kwevabereki vake Brandon Williams uye nhengo dzemhuri vaisaziva miganhu panguva yaakapfuura miedzo uye akagamuchirwa muUnited's academy.
Brandon Williams Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi - Basa Rokutanga Upenyu
Vanzwisisa chishuvo chemukomana wavo wekutamba nhabvu yekurarama, vabereki vaBrandon Williams vakaita zvese zvavaigona kutsigira basa rake rechidiki. Waizviziva here? Brandon akabatana neUnited (ane makore 6) panguva iyo American inshuwaransi mubatanidzwa AIG yakatsigira mari yehembe dzehembe uye iyo GOAT- C Ronaldo yakanga iri pamusoro pe simba rake.
Pakutanga, Brandon akaziva kuti aingoda kudarika kungova nehunyanzvi hwekuita basa uye shuwiro yekupinda mumakirabhu emakwikwi akanyanya emakwikwi ekirabhu. Aifanira kushandisa mutambo wehungwaru, kuverengera, kugona kwakasimba mumuviri, uye zvakanyanya kukosha, kuva nepfungwa dzakakodzera yekupfuura. Izvi zvakaona mukomana wepanzvimbo achibudirira kupinda mumarutsi, achisimbisa nzira yake kuenda kumakirabhu 'pasi pe23-nhanho.
Brandon Williams Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi - Mugwagwa Unoenda Mukurumbira
Pakutanga kwemwaka we2017 / 2018, Brandon akasimudzirwa kuchikwata che Under-23. IniHazvina kutora nguva yakareba kuti ave mushambadzi mune rake rakakura basa kuruboshwe-kumashure. Semubhadharo wenjodzi yake, kusimba uye kuzvivimba, Brandon Williams akapihwa kaputeni wemubati wechigaro cheUnited asi kunyangwe ari 18- iko kuzadzikiswa kwemwana ane imbwa.
Brandon Williams Mugwagwa kune Mukurumbira Nhau- Kukura kwake kunomuita kuti ave mutungamiri. Image Chikwereti: KutauraBaws
Brandon Williams Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi - Simuka Mukurumbira
Kushandisa mukana weKuboshwe-Kudzoka: ne Luke Shaw kusangana nekukuvara uye Ashley Young asingaite zvakanaka, Brandon akaona kushaya simba kuruboshwe-kumashure chinzvimbo cheUnited uye akabva atangisa kumhanyisa hurongwa hwekuzadza nzvimbo inodedera.
Kutanga, Brandon pa30th yaAugust 2019 akabudirira kurwisa nzira yake kupinda muchikwata chevechidiki cheEngland, kusimudzira kwakawedzera CV yake. Ipapo, wechidiki achiri kuruboshwe akatanga kumhanyisa hurongwa hwekuti aburuwe Ole Gunnar Solskjaer uye mafeni eUnited. Nekuti Brandon aive mutambi wenzvimbo akaberekwa uye akakurira muManchester (zvakangoita Marcus Rashford), pakanga paine iya yekuwedzera zverudo panguva yaakaputika muchiitiko ichi, achipa basa rinoshamisa.
Sezvo nguva yeManchester United 2019 / 2020 mwaka ichiramba kuora, pakanga paine tsika yekuwedzera yekutsvaga chero chinhu chaizopa kupenya kwetariro kuna kuruboshwe-kumashure. Kubuda kwaBrandon Williams kwakava iko kusimba kwetariro kwechikwata ichi senge nyeredzi yemuno pasina imwe nguva yakarova mukombe wake wekutanga mukombe wekurwisa Sheffield United pa24th yaNovember, 2019.
Kuwana iyi meteoric yekukwira yaona zvechokwadi Luke Shaw uye Ashley Young nekutya kuti mukwikwidzi wepamutemo webasa ravo reruboshwe zvechokwadi asvika. Iyo inongova nyaya yenguva Brandon asati aisa chikumbiro chakazara pachikamu. Vamwe vose, sezvavanotaura, ikozvino nhoroondo.
Brandon Williams Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi - Ukama Hupenyu
Nekusimukira kwake kumukurumbira uye maitiro ekutamba, zvine chokwadi chekuti vateveri veUnited vazhinji vakafungisisa nezve kuziva kana Brendon Williams aine musikana kana mukadzi. Ehe!… Hapana kuramba chokwadi chekuti chake kudzikama kudzikama uye akaunganidzwa anotarisa pamwe chete nemhando yake yekutamba zvaisazomuisa pamusoro peanogona kuwanikwa nemusikana webasa.
Fans vanga vachinetseka kuti Brandon Williams ane musikana kana mukadzi. Mufananidzo Wemifananidzo: Instagram
Panguva yekunyora, zvinoratidzika Brandon Williams akaita nhamburiko yekuziva kusaratidza chero ruzivo nezve musikana wake. Zvisinei hazvo panguva yekunyora, zvinoita kunge aigona kunge asina kuroora uye pamwe achitsvaga musikana. Ehe!! Thatschokwadi- sezvazvinoonekwa mumunhu weZara McDermott. Zvino ngatitaurei zvishoma nezvenyaya iyi.
Iyo Alleged Kufanana kweakaisvonaka Zara McDermott: Ndichangosvika Brandon yekutanga Premier Premier League chinangwa pa24th yaNovember, 2019, inozivikanwa yeBritish webhusaiti girazi rakaburitsa nyaya nezvake anotora mufananidzo weanogara akanaka-mutsara Zara McDermott uyo ari musikana kune chaiye nyeredzi Sam Thompson.
Mumushumo, Sam Thompson (inotaridzwa pamusoro apa neye mobile mobile digit proof) achipomerwa kuti akabata Brandon Williams achiedza kubata musikana wake Zara McDermott kuburikidza ne Instagram. Kune Zara akanaka, kunyangwe aine mukomana muna Sam, zvinoita kunge asiri pfupi yevanoyemura. Ndiani anoziva?… Zara anogona kunge akawira Brandon Williams uye anogona kunge ari musikana wake (kana kuti zvimwe kwete) pasina nguva.
Brandon Williams Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi - Upenyu hwehupenyu
Kure nezviitiko zvese zvebhora, kuziva Brandon Williams 'Hupenyu hwega hwaizokubatsira iwe kuwana mufananidzo uri nani wehunhu hwake. Kutanga, iye anotonhorera, akadzikama uye akaunganidzwa nhamba. Kure kubva kunhabvu, anowanzo kuwanikwa kunzvimbo dzakakodzera, haambopinda mumatambudziko uye anoziva musanganiswa wekurarama hupenyu hunofadza.
Zvizhinji pahupenyu hwake, Brandon ane nzira inoenda kuhupenyu, iyo inova nechokwadi kuti hapana chakasara mukana. Iye mumwe munhu anoisa anogara achinzwa kuti hapana yakakwana nguva yekurega mukana uchirasika kana auya kugogodza pasuo rake. Kuve mukwikwidzi we 'United-kuruboshwe' zvechokwadi ndiyo mukana wakakura waakawana muhupenyu hwake kusvika zvino.
Brandon Williams Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi - Upenyu hweMhuri
Brandon anodada nekurerwa kwake uye kukwirira kwaakaitwa nenhengo dzemhuri yake (kusanganisira mhuri yakawedzerwa) mumitambo, kwete munhabvu chete. Waizviziva here? Iyo Williams Mhuri inozivikanwawo kuManchester nekuda kwezvavakaita mubhokisi rekutenda kuna mukoma waBrandon- Zelfa Barrett uyo panguva yekunyora, ndeEngland Super Feather-uremu mhare.
Sezvatinoonekwa pamusoro, mhuri yaBrandon Williams zvakare ine musanganiswa wedzinza reBlithani nemidzi yemhuri yakateedzerwa kuAfrica.
Brandon Williams Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi - Lifestyle
Panguva yekunyora, Brandon mutambi wenhabvu anoridzira United, ndiyo hombe kirabhu muEngland. Kuve ari pamusoro mutambo wake, hapana mubvunzo kuti haazombofi akave miriyoni yemabhora bhora. Iye zvino kusvika pakuziva mararamiro ake kwaizokubatsira iwe kuwana mufananidzo uri nani wehupenyu hwake hwekugara.
Brandon anogara hupenyu hwakarongeka muManchester, hupenyu husina mari yekushandisa zvisina musoro. Iye munhu anoomerera pane zvinoshanda zvisingaite mari yakawanda. Panguva yekunyora, hapana chakadai sedzemoto mota dzepamhepo, dzimba hombe dzinoonekwa nyore nevatambi vanofamba mararamiro anonetsa.
Brandon Williams Mararamiro. Iye mushonga weanodhura kumararamiro anodhura Chikwereti: Express, Gm4u
Brandon Williams Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi - Untold Facts
A no-nonsense nhabvu nhabvu: Kuve nemunin'ina hama yangu ari mubhokisi zvinoreva kuti Brandon mubhokisi webhola aigona kuda kupisa nguva. Ehe, anogona kurasa kupora uye anogona kupokana nevanopikisa avo vanoda kurwa naye. Sezvacherechedzwa pazasi, hapana munhu anogona kukanganisa mukomana wemuno weManchester zvaive zvisina kunaka kuti Maypay amudane muhondo.
Brandon Williams- A no-nonsense defender. Mufananidzo Chikwereti: ManchesterEveningNews
Ndiye mudiki we10 vanhu vanozivikanwa vane zita rekuti Brandon Williams: Paunotsvaga zita rekuti "Brandon Williams" pa google, unokwanisa kuwana zita rine vanhu vakawanda vakakurumbira. Sekureva kweWikipedia, kune 10 mukurumbira Brandon Williams uye wedu chaiye ndiye gotwe kwavari. Tarisa uone kuzivikanwa kwe9 imwe Brandon Williams maererano neWikipedia.
CHOKWADI CHINOGONA: Tinokutendai nekuverenga yedu Brandon Williams Yemwana Nhau uye Untold Biography Chokwadi. At LifeBogger, tinoedza kururamisa uye kusasarura. Kana iwe ukawana chimwe chinhu chisingaratidzika sezvakanaka, tapota tigovera icho isu nekupindura pazasi. Isu tichagara tichikoshesa uye nekuremekedza mazano ako.